Uyile Njani iPhepha eliPhambili kunye noMva leNcwadi yakho njengePro | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Encarni Arcoya | 08/09/2021 18:00 | Ukuphefumlelwa
Unokuba uyilo nje oyalelwe ukuba wenze ifayile ye- amaqweqwe kunye namaqweqwe angasemva encwadi. Okanye mhlawumbi ungumbhali ujonge indlela yokwenza ngokwakho ukuze uzipapashe ngokwakho incwadi. Nokuba kunganjani na, sinokukunceda!
Zombini iziciko zangaphambili nezingasemva zencwadi zifana noluvo lokuqala olwenziwa ngumntu. Kule meko, into oyifunayo kukubamba ingqalelo yomfundi ukuze bakhuthazwe ukuba bathenge incwadi yakho. Ke kufuneka uyenze njani?
1 Yintoni ikhava yencwadi
2 Ithini ikhava yangasemva yencwadi
3 Kutheni le nto kubaluleke kangaka ukwenza iiNgcombolo zeNcwadi eziGqibeleleyo kunye neNgxelo eziNgasemva
4 Uyenza njani ngaphambili kunye nasemva kwengqokelela yencwadi
4.1 Yintoni omele uyigcine engqondweni kwizembozo?
4.2 Yintoni omele uyigcine engqondweni kwiphepha elingasemva lencwadi?
5 Olongezelelweyo: ungalibali umqolo kwizembozo
Yintoni ikhava yencwadi
Khawufane ucinge ukuba uhamba esitratweni kwaye ujonge kwifestile yevenkile ethengisa iincwadi. Kuyo kukho iincwadi ezikhethiweyo ezibekiweyo kwaye ezinye zazo zithatha ingqalelo yakho. Kuphela ngumfanekiso apho isihloko, umbhali kunye nokunye okuncinci kuvela? Yiyo loo nto.
La Isembozo sencwadi yinxalenye apho isihloko sencwadi siboniswa khona, igama lombhali kunye nomshicileli oyivelisayo. Kodwa eyona nto ifuthe kakhulu kukuzoba, umzekeliso okanye ukufota okuhombisa le ncwadi, ihlala ihambelana nembali engaphakathi.
Izimbozo zibonakaliswa koku kulandelayo:
Inolwazi olufunekayo ukukhathaza incwadi (ngesihloko, umbhali okanye umpapashi).
Bonisa umfanekiso ohambelana nebali elibaliweyo.
Musa ukulayisha ngaphezulu, kuba uyakudala isiphumo esichaseneyo, nesiza kuyaliwa ngumfundi ngenxa yokuba sigqibelele kakhulu (okanye ngokubonakala ngathi sisiphithiphithi kwaye ucinga ukuba nencwadi ngokwayo iya kuba njalo).
Ithini ikhava yangasemva yencwadi
Ngoku, uthini ngeqweqwe elingasemva? Lo "ngumva" weencwadi, kwaye yindawo apho ungaqhubeka khona nenxalenye yekhava okanye ukhethe umbala oqinileyo nokwahlukileyo.
Phakathi kolwazi olubekwe kwiphepha elingasemva kwincwadi itywina le-ISBN (litywina elibonisa inombolo yobhaliso ye-ISBN enayo le ncwadi). Olu tywina lunyanzelekile ukuba ufuna ukuthengisa incwadi kwiivenkile ezithengisa iincwadi, kwaye ikwayirenkile yombhali kuba umsebenzi ubhalisiwe kwaye kufunyenwe uxwebhu olusemthethweni xa umntu ethe wazama ukuyigqithisela eyakhe.
Enye idatha equlethwe yile Isishwankathelo sebali. Kule meko, kanye njengoko ikhava iyindlela yokuqala ebonakalayo kwibali langaphakathi, kwimeko yekhava yangasemva indlela yokubhaliweyo yeyokwesicatshulwa, kuba kubekwe isishwankathelo esincinci esifuna ukuthimba ingqalelo, lungisa umfundi.
Kuba isithuba esikwiphepha elingasemva alikho likhulu kakhulu, zama ukuqinisekisa ukuba isicatshulwa asiyigubungeli yonke indawo, kwaye ayincinci ukuba ingafundwa ngokulula. Ukongeza, iinkcukacha ezininzi akufuneki zinikezwe kuba ayisiyokuba umfundi, efunda loo nxalenye, uyazi ukuba kuzakwenzeka ntoni ebalini.
Abanye ababhali babeka ifoto kunye / okanye ibhayografi emfutshane kwiphepha elingasemva, kodwa oku kuyanyanzeleka kwaye ayonto ininzi abayisebenzisayo.
Kutheni le nto kubaluleke kangaka ukwenza iiNgcombolo zeNcwadi eziGqibeleleyo kunye neNgxelo eziNgasemva
Sele uyazi ukuba yintoni ikhava kwaye yintoni ikhava yangemva. Kodwa, Kutheni kubaluleke kangaka kwezi ukuba eyona nto ibalulekileyo yimbali engaphakathi? Ewe, inyani kukuba inezizathu ezininzi:
Kuba umfundi akazi ukuba luhlobo luni lwebali ngaphakathi kwaye uthathelwa yinto emtsala ngokubonakalayo. Kungoko kubalulekile ukuba isembozo sithandane size sithimbe umfundi, nokuba abayazi ukuba ithetha ngantoni le ncwadi.
Kungenxa yokuba ikhava yangasemva yeyona inokugqibezela le ntabatheko ngeqweqwe lencwadi. Khawufane ucinge ukuba uyithandile incwadi ngenxa yeqweqwe layo. Kodwa xa uyityhila, ikhava yangasemva ayikuxeleli nto. Ayinalutho kwaye awazi ngenene ukuba le ncwadi izakuba malunga nantoni. Ungayithenga? Eyona nto inokwenzeka kukuba hayi. Ngoku khawufane ucinge ukuba isiciko esingasemva sinesishwankathelo apho sikushiya khona ongaziwayo esikwenza ufune ukwazi ukuba kuzakwenzeka ntoni.
Iqweqwe liba ngunobumba wencwadi, kunye nombhali. Amaxesha amaninzi sichonga ababhali ngamaqweqwe abo. Kwaye xa ushiya umlo ngakumbi kunye nenkumbulo engakumbi, kokukhona impumelelo yakho iya kwaziwa.
Uyenza njani ngaphambili kunye nasemva kwengqokelela yencwadi
Ukuba unayo incwadi, okanye ugunyazisiwe ukuba wenze amaqweqwe eencwadi kunye nezembozo zangasemva, kuya kufuneka uyazi ukuba ufuna inkqubo yokuhlela imifanekiso ukuze uyenze. Enye yezona zinto zilungileyo kunye nezigqibeleleyo yiFotohop, kodwa enyanisweni ungasebenzisa eyona uyithandayo kwaye ikuvumela ukuba uhlele imifanekiso, uyiguqule kwaye ungeze isicatshulwa kubo.
Yintoni omele uyigcine engqondweni kwizembozo?
Xa usenza isiciko sencwadi, kufuneka ubene:
Umfanekiso. Oku kunokuza "kwisiseko", oko kuthetha ukuba kuya kufuneka uyicoce, uzikise kakuhle, uguqule amaxabiso okwahlulahlula, ukukhanya, njl. yomfanekiso kunye nokwenza ukuba ujonge ngakumbi.
Isicatshulwa. Kule meko ufuna isihloko somsebenzi, umbhali kunye nomshicileli. Abanye banokubandakanya ibinzana elibalulekileyo elivela kwincwadi, okanye ukukhankanywa ukuba ngaba yi-saga okanye i-trilogy.
Ukuyihlanganisa, kuya kufuneka uqale usebenze ngomfanekiso kwaye emva koko wongeze isicatshulwa. Icandelo ngalinye kufuneka libe lomaleko owahlukileyo, ngaloo ndlela, ukuba kuya kufuneka uguqulule into, kuya kuba lula kakhulu.
Gcina ukhumbula ukuba amaqweqwe aya kuba nemilinganiselo ethile ngokobungakanani bencwadi (eqhelekileyo yi-15x21cm). Ukongeza, indawo kufuneka ishiywe emaphethelweni ukunqanda ukuba, xa uprinta iincwadi, i-guillotine isika iindawo ezibalulekileyo ezinje ngesihloko okanye igama lombhali.
Yintoni omele uyigcine engqondweni kwiphepha elingasemva lencwadi?
Kwimeko yeqweqwe elingasemva, le Kufuneka ihambelane nesembozo. Umzekelo, ukuba isiciko sangaphambili sineziseko ezibomvu, kusenokungakhangeki kuhle ukubeka isiciko sangasemva ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, okanye oluhlaza.
Apha uya kufuna kuphela isicatshulwa esiza kubekwa, ekufuneka sigxile kwaye sishiye indawo eyaneleyo yebhakhowudi kunye ne-ISBN.
Olongezelelweyo: ungalibali umqolo kwizembozo
Ukwenza amaqweqwe angaphambili nangasemva encwadi akunzima. Kodwa kuya kufuneka ukhumbule ukuba zonke iincwadi zinomqolo, oko kukuthi, indawo ebanzi apho onke amaphepha adityanisiwe, ukongeza kumaqweqwe kunye nezikhuselo zangasemva. Lo kufuneka uyile uyigqibe kwaye uyenze isebenziseke. Kuxhomekeka kwinani lamaphepha, ubukhulu bomqolo buya kuba ngaphezulu okanye ngaphantsi.
Ukuba eli lixesha lokuqala, sicebisa ukuba ukhuphele ngaphandle itemplate, kuba oku kuyakwenza lula ukuyenza (umzekelo, iAmazon ineetemplate ngokwenani lamaphepha kunye nombala wazo).
Ngaba unesibindi sokwenza isiciko esingaphambili nesingasemva? Unamathandabuzo? Sazise kwaye siza kukunceda!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Uyenza njani ikhava yangaphambili nangasemva yencwadi yakho